Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo sheegay in uu masaafurin doono ama uu xiri doono ajaaniibta sharci darada ku joogta gudaha Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo sheegay in uu masaafurin doono ama uu xiri doono ajaaniibta sharci darada ku joogta gudaha Mareykanka
November 14, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. [Sawirka: CBS]
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay u qorshaysantahay in uu masaafuriyo ama uu xabsi dhigo in ka badan saddex milyan oo qaxooti ah oo aan sharci ku joogin Mareykanka, taasoo uu sheegay in ay kamidtahay arrimaha ugu muhiimsan ee uu doorbidayo, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyay taleefishin tan iyo markii la doortey.
Wareysiga oo la dhaho “60 Daqiiqo” oo uu la yeeshay taleefishinka CBS ayaa la baahiyey Axadii.
Waxa uu si cad ugu sheegay wareysiga in uu mustaqbalka baabi’in doono qaxootiga aan sharciga ku joogin dalka, isaga oo carabka ku dhuftay In uu diirada saarayo dadka dembiyada galay.
“Waxaanu rabnaa dadka dambiyada galay, kooxaha tuugada ah iyo daroogada kuwa gada, oo gaaraya ilaa saddex milyan in aan dalkayaga ka saarno ama aan xirno,” ayuu yiri Trump.
Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu ilaalin doono balanqaadkiisii ahaa in uu derbi ka dhisi doono xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico.
Si kastoo ay ahaataba, hadalkiisii uu jeediyay markii la doortay, waxa uu wacad ku maray in uu ahaan doono madaxweynaha “dhammaan Mareykan oo dhan”.
October 27, 2019 Madaxweynaha Mareykanka oo cadeeyay in hoggaamiyihii ISIS lagu dilay duqeyn ka dhacday waqooyiga Suuriya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqay in “musiibo qaran” ay dalka ka jirto oo ay keentay abaarta daran. Kulan looga hadlayay gurmadka abaarta oo maanta [...]